I-Starbucks Eqalisa Inethiwekhi Yomphakathi | Martech Zone
I-Starbucks Eqalisa Inethiwekhi Yomphakathi
NgoLwesine, ngoMashi 20, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Umbono wami we-Starbucks ayikakavuki okwamanje ivukile! Ukubeka inethiwekhi yokuxhumana nabantu ukucela izimpendulo kumakhasimende ngqo ezitolo abazigcinayo kungahle kungabi ngumqondo omubi. Uma kukhona umkhiqizo wokuthengisa ongaphumelela empeleni ngezingosi zokuxhumana nabantu, i-Starbucks kungenzeka kube njalo. Kungumkhiqizo omkhulu, ukuyo yonke indawo, abantu bayimilutha (ngokoqobo) kumkhiqizo wabo, futhi amakhasimende ayawuthanda.
I-Starbucks impela ibhekene nodonga. Balahlekelwe ukukhazimula kwabo nabalandeli, izindleko zokusebenza sezikhuphukile, ama-baristas amakhulu aba nzima ukuthola, ukusetshenziswa kwemali kwabathengi kusale, futhi izimbangi ezinjengoMcDonalds seziqala ukubhonga ngokulahlekelwa abaphathi bebhulakufesi. UMcDonalds uze weqa i-Starbucks ekhanda kuye ekhanda test ukunambitheka.
Kungani ngingekho eStarbucks kaningi
Ngokwami, ngivakashela i-Starbucks isigamu njengoba ngangivame. Ngiyakujabulela ukosa okukuqala engikuthola endlini yangakithi yekhofi futhi ngiyalithokozela iqiniso lokuthi imali yami ibuyela emnothweni wendawo. I-Starbucks ilahlekelwe ukubengezela kwayo lapho ngiqala ukuzibona ngamabhulokhi ambalwa ngaphandle komunye nomunye futhi i-wireless ibiza kimi ama- $ 30 ngenyanga. Ngise Starbucks kuphela lapho my IGreenwood Coffee House, Indebe kabhontshisi ayitholakali.
With UHoward Schultz ubuyele esihlalweni somshayeli, mhlawumbe i-Starbucks ingathola ithuba. Sizobona. Ukuqagela kwami ​​ukuthi iSocial Network izoba nenqwaba yeziminyaminya, ngabe ngikhethe ibhulogi futhi ngacela impendulo ngokuqukethwe engingakukhomba okungcono kancane.
Uzoba yini umbono wami nge-Starbucks? Izihlalo zikhululekile.
Ukwenza Okuphelele Ngokwenza kwakho imali
Mar 20, 2008 ku-6: 50 PM
Ikhofi elihloniphekile okungadingeki ukuthi udokotela uhhafu weping yemikhiqizo yobisi ukuze uliminyanise kungaba umqondo wami we-Starbucks.
Mar 20, 2008 ku-6: 52 PM
Pint, kunjalo. Ngelinye ilanga ngiyofunda ukuhlola amaphutha ngaphambi kokucindezela ukungena.
Mar 20, 2008 ku-8: 36 PM
Ngiyekile ukuphuza i-Starbucks lapho ama-baristas eyeka ukubheka phezulu kuwe lapho ethatha i-oda lakho futhi ebuyisela ushintsho. Akukho okuhlula isevisi yamakhasimende esezingeni lomhlaba, futhi i-Starbucks ishoda kakhulu kuyo. Ngicabanga ukuthi ngabe lokho kuqeqeshwa kosuku lwesigamu kusizile ??
Mar 21, 2008 ku-9: 39 AM
I-Starbucks isiphenduke iMcDonalds yekhofi, ngombono wami. Njengoba kushiwo ngu-Eric ngenhla, insizakalo yamakhasimende yehle kakhulu. Abasebenzi ngokuvamile babonakala bengenandaba nendlela abenza ngayo ezindaweni eziningi zokudla okusheshayo, futhi ikhwalithi yomkhiqizo ayihambelani (noma ngingasho ukuthi kwaMcDonalds akuhambisani kakhulu, hhayi ukuthi ngidla lapho kaningi). Bathathe into ebikade inesilondolozi esithile kuyo futhi bayenza ejwayelekile.
Ekuzivikeleni kwabo, anginasiqiniseko sokuthi kufanele ugcine kanjani amamaki wenzuzo ngezinga elikhulu emakethe enokuncintisana nekhofi kulezi zinsuku. Ngicabanga ukuthi ngokumbathiswa komhlaba wonke ngezitolo zakwaStarbucks bekuzoba nokulahleka kuzinga lonke lesipiliyoni ositholayo lapho uvakashela, kodwa kuyishwa. Ngingathanda ukubabona bethuthukisa izinto, kepha ngicabanga ukuthi banenselele enkulu ezandleni zabo.
Mar 21, 2008 ku-10: 15 AM
Angazi ukuthi ngabe i-Starbucks idinga inethiwekhi yokuxhumana nabantu njengoba uBode Miller engadingi ukukhulula inethiwekhi yokuxhumana nabantu ye-SkiSpace. Inani labasebenzisi abaningi elenza umphumela wenethiwekhi futhi lenze inethiwekhi yokuxhumana nabantu ibaluleke, ngakho-ke amasayithi we-niche azidubula ngokuzenzakalela onyaweni. Okungenani, IMHO 😉
Mar 21, 2008 ku-10: 48 AM
Ngicabanga ukuthi ngivumelana nawe, Dave. Okwesikhashana 'esifushane', kubonakala sengathi bacela impendulo nje futhi akuyona neze 'inethiwekhi yokuxhumana nabantu' ngomqondo ojwayelekile. Kuzoba mnandi ukubona ukuthi bayazisebenzisa yini izihlalo ezi-2 eziphezulu ezingenazintambo nezintofontofo.
Bobabili labo bagcina abashisekeli bezungeza isikhathi eside… into okungenzeka ukuthi indlu yekhofi yokukhiqiza ngobuningi ingayithokozi. Awuthengisi ngaphezulu uma ingekho indawo yokuhlala!
Mar 21, 2008 ku-11: 03 AM
Lokhu sikubona ngaso sonke isikhathi angithi? Umbono omuhle, umkhiqizo wentuthuko nenkampani, izikali zokusebenzisa ngokunenzuzo umkhiqizo oshisayo… bese iqala ukunweba njengokuhlanya ngemikhiqizo nezindawo ezingeziwe bese iqala ukulahlekelwa umongo wayo.
Ngisaqhubeka ngima ngeStarbucks yami yansuku zonke kepha ilahlekelwe isikhalazo sayo esiningi endleleni. Ngithanda ukuthi uShultz ubuyile ekuqondeni… ukhumbuza ngemisebenzi ebuyela ku-Apple… kufanele ibabuyisele eduze ekunikezeni okuhle. Ukuxhumana nabezindaba zenhlalo okungenani kuvula iminyango ngendlela entsha.
Umqondo wami ngabo kungaba ukulalela ngokucophelela izizathu zokuthi kungani amakhasimende akhona engasekho, abanye baya kwaMcDonalds nokuthi kungani abantu bekuthola kunzima kakhulu ukucabanga ngakho. Into eyodwa engizoyibeka lapho ukuthi kufanele bayeke isiteketiso bese banciphisa ulwazi. Ngiyavuma ngokuxhunywa okungenantambo. Noma kunjalo, izimpendulo zikhona lapho. Umkhiqizo onamandla kakhulu kubo ukuthi bangatholi indlela yokulungisa.
Mar 21, 2008 ku-11: 22 AM
Ngiyavuma Phil. Ngicabanga ukuthi kulahleka malini ngenxa yokuthi iStarbucks ayinayo leyo 'phunga lemoto elisha'?
Ukuba semfashinini kuyisisekelo esibi kakhulu sokwakha ibhizinisi lakho futhi kuvame ukufiphaza umbono wenkampani uqobo nokubaluleka kwayo. Ngicabanga ukuthi impumelelo enkulu ye-Starbuck kwakuwukuthambekela kwesiphuzo esipholile esinamagama amaningi ngentengo ebizayo.
Mar 22, 2008 ku-11: 03 AM
Yebo, isasasa lemoto entsha selikhuhlile. Ngiyakhumbula lapho abantu babevame ukungihleka ngokumisa nokusebenzisa lolo limi lwangaphandle engilufundile.
Kungenzeka ukuthi ushaye udaba olungumgogodla kubo… imfashini noma ukwethulwa okuhle ngokuba ne-'ourward experience 'elahlekile. Isikhathi sizotshela.
Ngo-Apr 27, i-2008 ku-11: i-13 PM
Ngenkathi futhi ngishayela ihlombe i-Starbucks ngokwakha inqubo eletha amakhasimende kunqubo yawo yokuqamba izinto ezintsha, kukhona okubi obe ungakusho. Izimbangi, kusuka ku-Peet's kuya esitolo sekhofi elisembotsheni esodongeni, nazo zingafinyelela engxoxweni emisha ye-Starbucks. Lesi yindawo yokugcina amagugu yalokho okufunwa amakhasimende, okuke kwazanywa, nokuthi yini okusebenzayo noma okungasebenzi. Ukwengeza, i-Starbucks yenza umsebenzi omuhle wokusebenzisana, ngaleyo ndlela inikeze ucwaningo lwemakethe lwamahhala.
Ngisavuna okwenziwe yiStarbucks, kepha ukube benginesikhathi esincane bengizophinda ngonakalise amabhodi eziphakamiso nsuku zonke!
Okuningi ngalesi sihloko esithile kusuka kumbono wokwenza kahle kwebhizinisi ku: